Newa Times : पारिजात र पारिजातका प्रेमी
साहित्य » व्यक्तित्व
लामाले दिएको ‘छेकुडोल्मा’, पुरेतले जुराइदिएको ‘विष्णुकुमारी’ र आफैले राखेको नाम ‘पारिजात’ । पारिजात नाम विश्वभर फैलियो । यायाबर बनेर जंगल घुम्दै पोल्टाभरि फूल टिप्ने रहर पालेकी पारिजातले ‘आफ्नो लागि फुल्ने र आफ्नै लागि झर्ने’ तथा बोटबाट टिप्न नहुने पारिजात फूलको विशेषताबाट प्रभावित भएरै आफ्नो नाम चुनिन् भने विश्व सामु चिनाउने उनको उपन्यास ‘शिरिषको फूल’को विशेषता पनि करीव करीव उस्तै छ, फूलको रस चुस्न खोज्ने भवराको समेत अन्त गरिदिने, अर्थात मात्र आफ्नै लागि फुल्ने ।
सानैदेखि साहित्यको रसमा चुर्लुम्म डुबेकी पारिजातको पहिलो प्रकाशित उपन्यास ‘शिरीषको फूल’ (२०२२) ले २०२३ सालमा नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा प्रतिष्ठित ‘मदन पुरस्कार’ पायो ।
पारिजातले पाएको मदन पुरस्कारको अवशेष सुरक्षित छैन । बहिनी सुकन्याका अनुसार पुरस्कारसँगै दिइएको चाँदीको दीयो निकै समय अगाडि हरायो भने सँगै आएको प्लेट पनि दुई वर्षभित्रै मात्र चाँदीको दाममा बेचिइसकिएको छ । रोगको अगाडि पारिजातले झुक्न वाध्य हुनभयो अर्थात करीव १३ वर्षको उमेरदेखि शुरु भएको ‘र्यूमाट्वाइड आथाराइटिस’ नामक हाड जोर्नी सम्बन्धी रोगको लागि औषधि किन्न बेच्नु पर्याे । पहिले सुन्निएर रातो हुने र सुन्निएको बसे पछि हाडै बाँगिने लक्षण भएको यो रोगले पारिजातलाई शुरुमा दाहिने हातको नाडीमा समातेको थियो भने पछि विस्तारै शरीरका अन्य भागमा समेत फैलिएको थियो ।
छोरीलाई डाक्टर बनाउने आफ्नो बाबुको सपनाको अगाडि जिन्दगीभरको रोगी भएर रहन बाध्य पारिजातको दाहिने हातका तीन औंलाले कामै गर्दैनथे भने बाँकी चोर औंला र बूढी औंलाका सहायताले लेख्नुहुन्थ्यो । पारिजातले कष्टसाथ लेखेको कृति तथा लेख वापत प्रकाशकबाट पारिश्रमिक पाउँन पनि कतिपय अवस्थामा हम्मेहम्मे पर्दथ्यो । महंगो औषधि दैनिक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने कारणले अभाव यति थियो कि, कुनै समय बहिनी सुकन्याले एक महिनाको लागि भनेर औषधि किन्न पैसा लिएर जाँदा तीन दिनको लागि पुग्ने औषधि आउँथ्यो ।
पारिजातको कमाउने छोरो बनेको ‘शिरीषको फूल’ को अंग्रेजी अनुवाद Blue Mimosa विदेशी साहित्य परिचय अध्ययन विभागअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेरिल्याण्ड विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समाविष्ट छ । तीस दिनमा लेखिसिध्याइएको त्यो उपन्यासकी प्रमुख पात्र सकम्बरीमा देखिने स्वाभिमान तथा अधिकांश पात्रमा देखिने शून्यवाद र निस्सारतावादको प्रभाव पारिजातमा अधिकांश समय रह्यो । पछिल्ला समय राजनीतिक अध्ययन र राजनीतिप्रतिको प्रभावका कारण उनमा जीवनप्रति निकै आशा पलाएको पाइन्छ । पछिल्ला समयमा जीवन नै राजनीति हो भन्ने मान्यता लिएर हिंड्नु भएकी पारिजातले आफ्नो ‘मृत्यु’ कवितामा ‘मृत्यु पनि संगठन भएर अंगालोहरूबीच बाँधिएको पाउँनुभयो । यस्तै पछिल्ला समयलाई सामाजिक सेवाका लागि पनि उहाँले दिनुभयो ।
दार्जिलिङमा जन्मिएर २०११ सालमा नेपाल पस्नु भएकी पारिजातले यहींको नागरिकता लिन चाहनुभएको थियो तर विभिन्न अड्को थापेर दिइएन । नेपालको प्रशासनबाट वाक्क भएकी पारिजातले त्यसपछि नागरिकता प्रमाण पत्रको चाहना र चेष्टा गर्नुभएन । कथन हुन्थ्यो– म नेपालमै बस्छु, नेपालमै मर्छु कसले भन्दो रहेछ म नेपाली होइन भनेर । सरकारी जागिर खाने होइन किन चाहियो नागरिकताको प्रमाणपत्र ? तर २०५० सालमा उहाँलाई सरकारले विदेश लगेर उपचार गराउने चासो देखायो र विना नागरिकता राहदानी तयार भएको थियो । एउटा विडम्बना, जिन्दगीभर कलम चलाउने पारिजातले कलम चलाएर हस्ताक्षर गर्न नसकेको कारण राहदानीमा ल्याप्चे लगाउनुभयो ।
बुवाको चुरोट खाने लतको प्रभावबाट पारिजातले शुरुमा चियापत्तीको धूलोलाई कागजमा बेरेर चुरोट खान सिक्नुभयो र पछि चुरोटको अम्मली नै । छोरीको अम्मली छुटाउन बुवाले चुरोट छोड्नुभयो तर पारिजातले छोड्न सक्नुभएन । रोगको पीडा भुलाउन उहाँले कुनै समय रक्सीको सहारा पनि लिनुभयो ।
आजीवन अविवाहित पारिजातका कृतिहरू अति गंभीर, स्वयं भने चंचले । जवानीमा छँदा एक युवकले मनपराएका थिए, शायद पारिजातले पनि । तर युवक सामुन्ने पर्ने वित्तिकै रिसाउँनुहुन्थ्यो उहाँ । नेपाल आएपछि पारिजातको विवाहको कुरा चल्दा उहाँले पहिला ती युवकलाई सम्झेर चिठ्ठी पठाउनुभयो । प्रत्युत्तरमा ती युवकको विवाह भइसकेको थाहा पाएपछि विवाह गर्ने विचार सधैंको लागि त्याग्नुभयो । पारिजातको देहान्तपछि ती व्यक्तिले नेपालमा आएर पारिजातको सालिक हेरेर गए । उनै प्रेमीलाई सम्झेर पारिजातले आफ्ना एक मित्रलाई चिठ्ठीमा लेख्नुभएको छ– …Tragedy of life is not what we suffer but is that what we miss. त्यसैले मेरो first love मात्रै Tragedy हो । बाँकी सवै दुःख हुन, only sufferings । मेरो जीवन अति गाह्रो र जटील भइदियो । यस्तो जीवन बाँच्न त मैले खोजेकी होइन । एउटा जटिलतालाई संगाल्न खोज्दा अर्को जटिलता थपियो । … … मैले त मात्र साधारण भन्दा बेग्लै जीवन बाँचु भन्ने सोचेकी थिएँ ।’